Global Voices teny Malagasy » Sivanin’i Shina Ny Hetsi-Panoherana Fananganana Orinasa Shimika · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 07 Mey 2013 16:15 GMT 1	 · Mpanoratra Abby Liu Nandika Andriamifidisoa Zo
Nidina an-dalambe ny mponina ao atsimo andrefan'i Shina ao Kunming tamin'ny 4 Mey 2013 ho fanoherana ny mety hamokarana vokatra shimika misy poizina ao amin'ny orinasa iray eo akaikiny.
Araka ny nolazain'ny fampitam-baovaom-panjakana, mana-pikasana ny hanangana orinasa shimika (mpanao fanafody) eo anilan'ny tanànan'i Anning ny Vondron'Asa Nasionalin'i Shina Mpitrandraka Solika hamokatra 500.000 taonina paraxylene (PX) hanaovana fananganana. Olona manakaiky ny 3000  no nivory teo afovoan-tanàna hanohitra ny mety ho fiparitahan'ny PX .
Nataon'ny mpampita vaovaom-panjakana ao Shina izay tsy nilazana ilay hetsi-panoherana, ary niasa mavitrika tamin'ny famafana ny sary vaovaon'ny fihetsiketsehana ao amin'ny famahanam-bolongana bitika Sina Weibo ny mpanao sivana an-tserasera hatramin'ny 4 mey 2013. maro moa ireo mpiseran'ny tranonkala no nanova ny sarintavany ho sarin'ny “Kunming PX” nasiana vokovoko ho endri-panohanana.
Malaza amin'ny voninkazo sy ny hazo ao i Kunming noho ny toetr'andro toy ny lohataona mandrakariva ao. Io no iray amin'ny tanan-dehibe Shinoa vitsy dia vitsy mba manga hatrany ny lanitra.
Efa nisy fihetsiketsehana tahaka izao ihany koa nipongadra tany amin'ny tanàndehibe hafa. Tamin'ny 2007, olona an'arivony tany amin'ny tanàna faritra atsinanan'i Shina ao Xiamen  no nanohitra fananganana orinasa mpamokatra PX. Tao anatin'ny roa taona izao, fihetsiketseha-panoherana NIMBY roa goavana no nipoaka tao Dalian  sy Ningbo .
Mpanao fihetsiketsehana manao sarontava saimbolika sy mampiakatra afisy mampitandrina ny lozan'ny fiparitaky ny paraxylene (PX). (Avy amin'ny Sina Weibo )
Mpisera Weibo iray “Boluocun Yihao” avy ao Kunming no niantso  [zh] fanohanana an-tserasera bebe kokoa:
Famehezana ny fampitam-baovao, fanapahana ny antso finday, ny polisy heverinaho miaro ny vahoaka tsy niaro ny vahoaka, “Ry orinasam-panadiovana solika-shimika XX, mialà an'i Kunming!” Tsy mila reniranon-dronono  izahay [lasa nivadika lokon-dronono ny renirano ao Kunming noho ny loto], Tsy mila PM2.5 [fandotoan-drivotra] izahay, tsy mila PX izahay. Miangavy aparitaho ity hafatra ity. Arovy i Kunming renintsika.
Mpisera Weibo iray hafa avy ao Kunming nitsikera  [zh] ny sivana mihatra amin'ny fampitam-baovao:
Ity firenena goavana ity, fa ny “Vaovao Takarivan'i Beijing” ihany no nitatitra araka ny tokony ho izy izay nitranga tao Kunming omaly. Tsy tao no niaingan'ny tatitra, fa notsongaina avy amin'ny NetEase. Voalaza fa nanao tafatafa ny tao amin'ny sampandraharaham-panangonam-baovaon'i Shina omaly, saingy noraràna ny famoahana izany tamin'ny farany. Nanafina araka izay azony natao ny fanangonam-baovao Xinhua na ny CCTV ….Tsy manana fampitam-baovao hisolo vava ny vahoaka i Shina. Mingavy mba alefaso indray ity hafatra ity raha ekenao ny voasoratra.
Nanao izay hampiàko  [zh] ny fahatsapana ao anatiny ny mpitendry mozika iray avy ao Kunming “Yinyue Xiaosun”:
Banner reads: “Beautiful Kunming! We need to survive! We want to be healthy! PX—out of Kunming !” (From Sina Weibo )
Ry namana Media eto Kunming, azoko ny fizotry ny asanareo, tahaka ny ahazoantsika ny politika ankehitriny. Saingy monina eto Kunming ianareo. Tiantsika rehetra ny tanànantsika ary tiantsika ny zanatsika hifoka rivo-madio, sa tsy izany?? Sa tsy izany? Sa tsy izany?
Ny mpisera Weibo “Kong Batian” nampahatsiahy  [zh] Fampirantiana Voly Voninkazo Mondialy  notontosaina tao Kunming tamin'ny 1999:
14 taona lasa izay, tamin'ny alalan'ny lohahevitra manao hoe “olona sy natiora, mizotra mankany amin'ny taonjato faha-21”, nirehareha tamim-pireharehana sy fientanentanana ny Fampirantina Mondialy voalohany tao Shina ny mponin'i Kunming ! 14 taona taty aoriana, midina an-dalambe ny mponin'i Yunnan hiady hiaro ny tontolo iainana! Izany no fanarabiana lehibe mahazo ny vahoakan'i Kunming!
Nanatsonga  [zh] ny tononkalo nosoratan'ny mpanao gazety malaza Bai Yansong ny mpisera Weibo maro:
Marika mivaky hoe “Dadatoa sy nenitoa, mila rivotra madio izahay!” (Avy amin'ny Sina Weibo )
Tsy ho ela fa nitsontsorika tsy ho hita sy hoadinoin'ny tantara ilay tantara. Hitoetra ho angano hatrany ilay angano mahafinaritra. Tsy misy olona azo tazonina ho tompon'andraikitra satria izay tokony ho izany efa nandao ny tanàna, ary efa nifindra monina ny zanany, namela tanàna rotidrotika sy maloto miaraka amin'ny olona tsy manantsiny, faritry ny homamiadana ….. io tanàna io dia nantsoina hoe Kunming.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/05/07/48394/
 manakaiky ny 3000: http://news.ifeng.com/photo/hdnews/detail_2013_05/05/24941670_0.shtml#p=1
 izay hampiàko: http://weibo.com/1870927200/zvclyFOgs
 Fampirantiana Voly Voninkazo Mondialy: http://en.wikipedia.org/wiki/1999_World_Horticultural_Exposition